လူသားအားလုံးအတွက်: စိတ်ညစ်နေ စိတ်ဓာတ်ကျနေသော သူငယ်ချင်းများ အတွက်ပါ
စိတ်ညစ်တယ် စိတ်ဓာတ်ကျ တယ်ဆိုတာ ထွက်ပေါက်မရှိလို့ ဖြစ်ပါတယ်။ ထွက်ပေါက် ဆိုတာ ဘာလဲ ? သူငယ်ချင်း အရမ်းစိတ်ညစ်နေတဲ့ အခါလေးမှာ ဘာလုပ်မှာလဲ ?
၁။ အရက်သောက်မှာလား ?
၂။ ပျော်အောင်နေမှာလား ?
၃။ ပြသာနာကို ရှောင်ပြေးနေမှာလား ?
စိတ်ညစ်နေရင် စိတ်ကို ဖြေမဲ့ နည်းလမ်းက ထွက်ပေါက်ကို ရှာတတ်ကြပါတယ်။
ထွက်ပေါက်လေး တစ်ခုရအောင် သူငယ်ချင်း ရဲ့စိတ်ဓာတ်ကို အရင် ပြောင်းကြည့်ဖို့ ဒီစာလေးကို ဖတ်ကြည့် ရအောင် ....
သူငယ်ချင်း စဉ်းစားကြည့် ...
ဒါပေမယ့် လောကကြီးဟာ နေတတ်ရင် ကျေနပ်စရာလေးပါ။ လူမှန်သမျှ စိတ်ညစ်တာတွေ ရှိနေကြ ရှိကြတာပါ။ အနည်းနဲ့အများ သာ ကွာတာပါ။ ဘဝမှာ စိတ်နဲ့ပဲ ဦးဆောင် စိတ်နဲ့ပဲ အလုပ်လုပ်နေရတာပါ။
စကားတစ်ခွန်းတော့ ကြားဖူးပါတယ် " လူ့ဘဝဆိုတာ ရခဲ့ပါတယ် "ဒါကြောင့် ရခဲ့လှတဲ့ လူ့ ဘဝလေးမှာ စိတ်ဓာတ်မကျဖို့ စိတ်အားမငယ်ဖို့ လိုအပ်ပါတယ် သူငယ်ချင်း ......
ဘဝတစ်ခုမှာ မင်းကသာ ဦးဆောင် မင်းကသာ နောက်လိုက်ဖြစ်တယ်။ မင်းရဲ့စိတ်ဓာတ်ကို ဘယ်တော့ မှ ပျော့ညံ့နေလို့ မရဘူး။ စိတ်အားမငယ်ရဘူး စိတ်ညစ်မှု မရှိစေရဘူး။
ပြသာနာ တစ်ခု ဖြစ်လာရင် ကြုံလာရင် မရှောင်ပြေးပါနဲ့ ရင်ဆိုင်ရဲတဲ့ သတ္တိလေးကို ထားပြီး အလောတကြီး မဟုတ်ပဲ ခေါင်းအေးအေးလေး ထားပြီး ဖြေရှင်းပေးပါ။
မင်းစိတ်ကို တတ်နိုင်သလောက် စိတ်ပျော်အောင်နေထိုင်တတ်ရမယ်။ ပြောဆိုဆက်ဆံတာတွေ သွားလာလှုပ်ရှား နေတာတွေဟာ တကယ့် စိတ်ပါလက်ပါနဲ့ လုပ်ဆောင် နေထိုင်ရမယ်။ လူဆိုတာ အမြဲတမ်း ပျော်နေတဲ့ သူတစ်ယောက်မှ မရှိပါဘူး စိတ်ညစ်မှု တစ်ချိန်ကျရင် ကြုံတွေ့ဆိုင်ရင် ရမယ်။ ဒီတော့ ခံနိုင်ရည် ရှိအောင် ကြိုးစား နေထိုင်တတ်ရမယ် ....
သူငယ်ချင်း ... ငါကြားဖူးတဲ့ စကားလေး တစ်ခွန်း က
" ဘယ်တော့မှ စိတ်မပျက်နဲ့ စိတ်ပျက်နေ စိတ်ဓာတ်ကျနေရင် အလုပ်ကို
ဒါကြောင့် အသက်နဲ့ ရှင်သန်နေတဲ့ ဘဝတစ်ခုမှာ စိတ်ညစ်နေ စိတ်ဓာတ်ကျ နေမဲ့အစား အလုပ်ထဲမှာ စိတ်ကိုထိန်းချုပ်ထားပြီး ပို၍ လုပ်ကိုင်သင့်တယ်လို့ ငါပြောချင်ပါတယ် သူငယ်ချင်း ...
မင်း ... စဉ်းစားကြည့်နော် ..
အဆိုးကိစ္စတွေကို ဘယ်သူက မလိုချင်ပါဘူး .... ဘယ်သူမဆိုကောင်းတာနဲ့ ဆိုးတာကိုကောင်းတာကိုပဲ လိုချင်နေကြတဲ့ လူတွေချည်းပါပဲ။
ဒါကြောင့် ဖြစ်လေရာ ဘဝတစ်ခုကို ဖြစ်သလို နေမဲ့အစားလောကကြီးကို အရှုံးမပေးပဲ ကြံကြံခံ ရင်ဆိုင်ရဲ့တဲ့ သတ္တိလေးတွေ အတွေးလေးတွေ စိတ်ဓာတ်လေးတွေကို ပြုပြင်သင့် ထားသင့်ပါတယ်။ သူငယ်ချင်း ...
လောကကြီးမှာ ဘာမှလွယ်လွယ်နဲ့ရတာ မရှိပါဘူး .... သူငယ်ချင်း ဒီတော့ မင်းဘယ်တော့မှ စိတ်ဓာတ်မကျပဲ အရာရာကို ရင်ဆိုင်ရဲ့တဲ့ စိတ်ဓာတ်လေးကို ထားသင့် ပါတယ်။
အကောင်းဆုံးကိုလည်း မျှော်လင့်သလို အဆိုးကိစ္စတွေ ကိုလည်းရင်ဆိုင်ရဲ့တဲ့ စိတ်ဓာတ်တွေ သတ္တိတွေရှိထားပါ။
အရာရာကို အရှုံးပေးချင်တတ်တဲ့ အားငယ် တတ်တဲ့ သူငယ်ချင်းရဲ့ စရိုက်လေးကိုပြင်ရမယ် ...
ဘဝလေးဟာ တိုးတက်ဖို့ ဆိုတာ အသေအချာပဲ သူငယ်ချင်းရေ ......
နောက်ဆုံး ငါမင်းကို စကားလက်ဆောင် ပေးချင်တာက" ဘဝမှာ အနေတတ်ရင် အသေမြတ်တယ် " ဆိုတဲ့စကားလေးပါပဲ။
မင်းစိတ်ညစ်နေတဲ့အခါ စိတ်ဓာတ်ကျနေတဲ့အခါ ဒီစကားလေးကို သတိရလိုက်ပါ။
ရောက်လေရာ နေရာလေးတွေမှာ လူတိုင်းလူတိုင်းနဲ့ လိုက်လလျှောညီထွေ နေထိုင်ပြီး သူငယ်ချင်း ရဲ့ဘဝလေးကို စိတ်ဓာတ်မကျပဲ နေနိုင်ပါစေ။
စိတ်ညစ်နေတဲ့အခါ လမ်းမှန်ကို ရွှေးတတ်ပြီး အဆင်ပြေအောင် နေထိုင် တတ်ပါစေ။ သူငယ်ချင်း ....
Posted by နေဇော် လင်း at 10:54 PM Email ThisBlogThis!Share to TwitterShare to FacebookShare to Pinterest
စိတ်မပျက်နဲ့စိတ်ပျက်ရင် ကျန်တာ ခက်မယ် ဆိုတာ ပြော၇လွယ်တယ်ဟ။ လုပ်ရ သိပ်ခက်တာ။ ဒါပေမယ့် ဒါမျိုးတွေ ဖတ်လိုက်ရရင် အားရှိသွားတယ်။ ကျေးဇူး။
အရှေ့မှာ လမ်းက ၂ သွယ်မဟုတ်ဘူး လမ်းပျောက်နေရင်ကော။ (ပုံကိုပြောတာပါ) ဟဲဟဲ
ဒကာတော်မိုးယံရေ မင်္ဂလာပါ။ အားဆေးတွေ လာသောက်သွားတယ် ဒကာတော်မိုးယံရေ။ ကျန်းမာပျော်ရွှင်ပါစေနော့...